Umthandazo kuSanta Raphael Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
La Umthandazo kuSanta Raphael Enye yezona zinto ziceliwe kakhulu xa kuziwa kwimicimbi yokuphilisa impilo yengqondo, yomzimba kunye neyasemoyeni; Kuthathwa njengenye yezona ngelosi zibalaseleyo ukufikelela kunyango olupheleleyo emzimbeni wakho, ukongeza, iyinxalenye yeengelosi ezisixhenxe ezisetroneni yeNkosi yethu. Ukuba ufuna ukufumana ulwazi oluthe kratya ngolu hlobo, kuya kufuneka uqhubeke nokufunda inqaku.
1 Umthandazo uSanta Raphael kunye nentsingiselo
2 Ibali likaTobit
2.1 Kuthekani ngoSara?
3 Wenza eyiphi indima uSaint Rafal kweli bali?
3.1 Libonakala njani ibali likaTobías Azaria?
4 Umthandazo wokuphilisa uSan Rafael
Umthandazo uSanta Raphael kunye nentsingiselo
Ngaphambi kokwazi umthandazo oyiNgcwele Raphael, Kubalulekile ukuba uqonde kancinci malunga nemvelaphi kunye nembali. Ukwiqela lezithunywa zezulu ezisixhenxe ezihamba noThixo etroneni yakhe, ukongeza koku uthathwa njengoyena mntu uphambili ekuphiliseni kuzo zonke iinkolo ezikhoyo namhlanje, nangona kunjalo, kukho nezinye ezingamamkeliyo enjalo .
Imvelaphi yegama lokuqala Raphael.Igama lokuqala Raphael lithetha ntoni? Akaziwa ngokwenene ngaphakathi kwiQur'an, nangona kunjalo, i-hadith (uncwadi oluvela kule ndawo), lumjonga njengomnye wabo bakwi-Qur'an, emelwe lixilongo emilebeni yakhe, elindile kuphela ukuba uThixo axele ngomhla eyenzeka ngawo ityala Okokugqibela.
Eli gama lithetha ukuphiliswa okanye ukuphiliswa kukaThixo, kwakhona, sisidalwa esingcwele nesiphezulu esisebenza njengesikhokelo soogqirha nabo bonke abagulayo, nokuba basesibhedlele okanye hayi. Onke amandla kunye nokuphilisa amandla okuhambisa yinto eyenza ukuba ibe namandla kwaye inoxanduva lokugcina lonke ubudlelwane bothando kwicala elilungileyo.
Enye yeemeko ezenza ukuba enye yezona ngelosi zibaluleke kakhulu kubo bonke ubukumkani bethu yinkosi, kukuphiliswa kwamehlo okanye ubumfama oboniswe nguTobit. Esi yayisisiganeko esibalulekileyo kwimbali yakhe kwaye samenza waba yenye yezona ngcwele zibalaseleyo zokwenza imimangaliso.
UTobit wayengumlinganiswa owayengowenkolo yamaYuda akwaNafetali, nangona kunjalo, kamva emva kweziganeko ezithile esiya eNineve. Eli bali liqala xa ngenye imini, uTobit wayehamba njengesiqhelo kwaye emehlweni akhe iintaka zeentaka zaqala ukuwa, ngelo xesha wayeyindoda endala egcwele ubulumko obuninzi kunye nolwazi olumangalisayo olunxulumene nezihloko ezahlukeneyo.
Oogqirha babonisa unyango olwahlukeneyo ukufezekisa imeko okanye ubunzima obubonayo obangele ilindle leentaka, nangona kunjalo, akukho namnye osebenzayo kwaye nesifo besinzima kwaye kunzima ukusinyanga yonke imihla.
Ngelo xesha kanye ubomi bukaTobit babukhathazekile; kuba, kwelinye icala, intombi yakhe yayizama ukuzibulala, emva kokuxabana nenenekazi lomzi wakhe, elalijongene nokugcina wonke umntu ecocekile kwaye elungile. Lo mfazi wenza izityholo eziqinileyo, apho elinye lamagama asetyenzisiweyo "ngumbulali", konke oku kuvela kuba, intombi kaTobit, yayitshate kasixhenxe ebomini bayo kwaye amaqabane onke asweleka.
Esi yayisisiphumo sokuba abanjwe nguAsmodeus, enye yeedemon eziphambili zenkolo ka-Abraham; wenza ukukhusela uSara (intombi kaTobit) kuba umthanda ngokupheleleyo, emtshatweni ngamnye azama ukuwenza, uAsmodeo uveza iindlela ezahlukeneyo zokuziphindezela kwaye loo mfazi ngowakhe ngokupheleleyo.
Ngesi sizathu, umtyholi wenza isigqibo sokuphelisa ubomi bala madoda ahluphekayo nabamsulwa, kusuku nje ngaphambi komsitho. Emva kwayo yonke le micimbi, uSara ucinga izinto kakuhle kwaye ugqiba kwelokuba aguquke kumzamo wokuzibulala awenzileyo; uzimela ngoThixo ukuze amnike konke amandla Kuyimfuneko, kwaye ke woyise usuku ngalunye oluseleyo.
Wenza eyiphi indima uSaint Rafal kweli bali?
UThixo ngaphandle kwamathandabuzo umzuzwana, uyabela enye yezona ngelosi zakhe zintle. Nangona kunjalo, emva kokugula kakhulu kukayise kunye ukufaKula madoda asixhenxe awayezimisele ukumtshata, kuphela ubudlelwane phakathi kukaTobías; Kuya kufuneka aqiniseke ukuba le ntokazi intle iyahambelana nomthetho werhafu, oquka ukutshata kwakhe nomntakwabo wamadoda aswelekileyo.
UTobías, uthatha isigqibo sokuhamba ngendlela yakhe, kodwa akazange athembele kuSanta Raphael ngohlobo lwengelosi enkulu, ukuba avele. Ngokucacileyo, indlela abonakala ngayo iyafana naleyo yendoda ethi nayo ilandele umendo; Wazazisa kuTobías njengoAzariya kwaye baqala ukuba nencoko emnandi, bade baba ngabahlobo abakhulu, ngaphandle kwexesha elifutshane emva kwento eyenzekileyo.
Libonakala njani ibali likaTobías Azaria?
U-Azaria uphethe ukumxelela lonke ibali likaSara, ukuze lo mfana amthande nangaphambi kokuba ahlangane naye. USan Rafael umchaza njengentle kakhulu kodwa kwangaxeshanye engumfazi oneentloni.
Ukongeza, yongeza isisombululo ukuze uSara enze unyango olufanelekileyo lokugula kukayise. Into ephambili kukuba uTobías, ubamba intlanzi, kwaye emva koko, kufuneka ayivule ade akhuphe intliziyo nesibindi phambi kwentombazana encinci, uyatshisa la malungu. Umsi ovelayo kufuneka ususe ngokupheleleyo idemon emzimbeni kaSara, nayo, iyakusebenza ukuphucula imeko katata wakhe.
Ngokunxulumene nalo mba, into ebalulekileyo yayikukugcina i-gallbladder yale ntlanzi. Emva kokuba ekugqibeleni efikile kuloo ndlu, ubeka ulwelo olufihliweyo sisibindi sentlanzi emehlweni kaTobit kunye nommangaliso abebewulindile ixesha elide wenzeka.
Umthandazo wokuphilisa uSan Rafael
Isikhokelo sokomoya kunye no-Saint Raphael iNgelosi enkulu, ndikhetha yonke imihla njengobuthixo obakhathalelayo bonke abo bantu bachatshazelwe yiyo nayiphi na imeko ebeka impilo yabo emngciphekweni. Ugqirha owenza imisebenzi kaThixo, ngohlobo lokuphilisa, uphilisa bonke abagulayo njengoko wenzayo ngoTobías.
Ukuba uluthandile lonke ulwazi kunye nembali enxulumene neNgelosi enkulu uRafael, ungathandabuzi ukuqhubeka nokuzizalisa ngeenyani ezinomdla kwaye ezi zinokufumaneka Umthandazo wamatyala anzima. Sikushiya nevidiyo apho unokufunda ngakumbi malunga nesihloko.
Epreli 16, 2021